Luz de Maria - Ekeo ny famantarana ny vanim-potoana! - Countdown ho an'ny Fanjakana
Md Michael Arkanjely ho	Luz de Maria de Bonilla	, 25 aprily 2020:
Vahoakan'Andriamanitra, Iray sy Telo:
Amin'ny maha Tompon'ny tafika ny lanitra, manatona anao amin'ny teny avy any ambony aho mba handinihanao ny tenanao alohan'ny ora.
Ny feo dia re miaraka amin'ny aretina vaovao sy vaksinim-baovao, maneno mihoatra ny lakolosy, mihoatra ny trompetra, mihoatra ny legiona, mihoatra noho ny fitaovam-piadiana, mihoatra noho ny fanazavan'olombelona. Ny Vahoakan'Andriamanitra dia tokony hiomana hatrany: Ilaina ny firaisankina mba tsy hidiran'ny "onjan'ny hevitra" ao an-tsain'ny olombelona ary hampisaraka ady hevitra poakaty an'ireo nanolo-tena hiova fo.
Nampitandrina anao ny lanitra mba hahita ny fiovana lehibe izay iainanao, ampanaovina azy amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Tsy hisy na inona na inona ny zava-drehetra: tadidio fa tsy hisy na inona na inona ho an'ny olombelona, ​​izany no mahatonga ny olombelona ho toa mihamalemy, miatrika fitsipika vaovao amin'ny fitantanana manerantany. Ny mason'ireo mpitondra dia hianjera amin'ny tany, ary ho hita ny maha izy azy ireo.
Ry Andriamanitra malala, ny olona dia mihorohoro ao amin'ny antechamber ny fitohizan'ny fihanaky ny tsimokaretina mandra-pahazoany ny ratsy izay nahary azy.
Ny olombelona dia matahotra noho ny nilaozany ny finoana. Zanaky ny Tompontsika sy Mpanjakan'ny lanitra sy ny tany: mitsangàna, tsy hitaredretra ireo famantarana, Hirotsaka ny lanitra amin'ny fanaintainany. Ry olombelona! Mijaly tsikelikely ianao, toy ny iray manantona amin'ny afo natelin'ny tanany ihany!
Notazomin'i satana ity taranaka ity, manajamba an-tsokosoko ny sain'ny olona amin'ny fiheverana manokana izy ireo, mba tsy hanatonana ny fitiavana ny zanak'olombelona fa mankany amin'ny fifandirana, fialonana, fikomiana. mitranga ny fitsapana lehibe ny Apôstazia. Ry olon'ny Mpanjakantsika sy Jesosy Kristy Tompontsika: izay manana ny tena Finoana dia hanohitra ary tsy hivadi-pinoana; na iza na iza tsy manana ny tena Finoana dia tsy hanohitra. Hadinonao fa "eo ambany fiarovan'ny Avo Indrindra" dia voavonjy amin'ny tranon'ny ratsy ianao.
Izao no fotoan'ny marina; eny, na dia eo afovoan'ny fahoriana aza, dia hahazo fanampiana izy ireo; izao no Fotoan'ny fotoana ka tsy maintsy manokan-tena ho an'ny Queennay sy Neny ianao, amin'ny fo marina sy tsotra ary manenina, ary amin'izany fomba izany dia hahazo hery vaovao, hery vaovao, fandresena vaovao, ny mpino, noho ilay Mpanjaka malalantsika sy Jesosy Tompontsika Nomen'i Kristy ny tehim-pahamarinana i Kristy mba hampisarahana ny olony amin'ny tsimparifary.
Mivavaha, ry malala, mivavaha am-po, mivavaha miaraka amin'ny fahamarinana, mivavaha miaraka amin'ny fanahy, mivavaha amin'ny saina, mivavaha, ianareo izay nahita ny fahitana ireo firenena tafahoatra noho ny fahatsapana manirery izay mitarika ny zanak'olombelona mangina sy tsy matahotra ary tsy afa-manoatra.
Mivavaha, tonga ny aretina. Mivavaha, amin'ny alàlan'ny fitaka fanampiana, i Etazonia dia lasa voaloto.
Ny herin'ny herin'ireo ankizy kely dia asongadin'izay manafina ao ambadiky ny mahery izay mandrindra tsikelikely ny zanak'Andriamanitra. Manantena ve ianao fa hisy ady hanafika? Izany no antony tsy ahatsiarovanao ny fotoan'ny ady; hiasa amin'ny teny mankany amin'ny asa izy ireo, hifampiampanga izy ireo mandra-pananganany ny fitaovam-piadiana ary hisy ny fijaliana ho an'ny olombelona rehetra.
Mananatra ireo izay tsy mahalala ny famantarana ny fotoana aho: mifoha, alohan'ny hamirapiratan'ny vatana selestialy lehibe any an-danitra fa, toy ny biby dia manatona ny tany amin'ny hazavan'ny andro!
Ry olon'ny Mpanjaka sy Jesosy Kristy Tompontsika, izay manana ny tena Finoana ihany no hahatsapa ny Fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoan-tsarotra. Miova ankehitriny! Mitandrema, mampitandrina anao aho, mitandrema, miova! Miomàna am-panahy, rehefa vita ny fampitandremana dia ho marina kokoa ny olo-marina ary ho masina kokoa ny masina.
Tiavo ny fitia-pitiavana! Manompoa an'Andriamanitra, iray sy telo, ianao dia isan'ny vahoakany. Tiavo ny vadintsika sy ny reninay, mialà ao aminy, mpampionona ny ory.
Posted in Luz de Maria de Bonilla, Ny fotoan'ny fahoriana.
← Pedro Regis - Tsara be…
Simona - Tonga hanangona ny tafiko aho →